Iincwadana ezinemifanekiso ezikwi-Intanethi, iitemplate zeMAHHALA ezingama-30 zeencwadana zeFotohop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Incwadana ye-Intanethi, iitemplate zencwadana yasimahla ezingama-30
UFran Marin | | Izibonelelo, itemplates
Ngaba ujonge ii-triptychs ezikwi-Intanethi? Umfanekiso wenkampani uhamba ngaphaya kwelogo okanye igama lophawu. Ubuntu beshishini buyilwa ngemithombo yonxibelelwano eyahlukeneyo kwaye uninzi lwezinto eziguqukayo ziya kudlala apha. Enye yazo yindlela yokubonisa iimveliso kunye neenkonzo zeshishini. Namhlanje kukho inani elikhulu lezicwangciso zokukholisa nokwazisa umxhasi, ezinye zisebenza ngakumbi kunabanye.
Nangona namhlanje kukho inani elikhulu leefomathi kunye neenkxaso, inyani kukuba eyomdabu iseyeyona isebenzayo. Iincwadana ziindlela ezizezona zisemgangathweni kuba badibanisa ulwazi kunye ne-aesthetics kwisisombululo esinoqoqosho kakhulu ngokwendawo. Kwi-triptych singabandakanya ngokulula zonke izinto eziyimfuneko ukuhambisa izibonelelo kunye neenkonzo zethu kunye nolwazi lokunxibelelana kunye nenkampani uqobo, ke, siyathemba ukuba ukhetho lwethu lwe-triptychs ezikwi-Intanethi ziya kuba luncedo ukuphucula uguquko lweshishini lakho.
1 Uyenza njani incwadana
2 Isondlo kunye nendlela yokuphila esempilweni
4 Iflaya yomdibaniso yeenkampani
5 Iflaya yomdibaniso yeenkampani
6 Iflaya yomdibaniso yeenkampani
7 Iflaya yomdibaniso yeenkampani
8 Iflaya yomdibaniso yeenkampani
9 Iflaya yomdibaniso yeenkampani
10 Ikhathalogu yempahla
11 Incwadana encinci yeenkampani
12 Incwadana enemigca emincinci yeemoto
13 Incwadana yokudibanisa idiptych
14 Incwadana yeshishini
15 Incwadana engaphambili nangasemva
16 Incwadana enemibhalo emibini yeentliziyo
17 Incwadana enemibhalo emibini yeentliziyo
18 Ithemplethi yomdibaniselwano
19 Incwadana yokundwendwela
20 Incwadana encinci
21 Incwadana ye-Shidler Trifold
22 Incwadana yokutyela iflyer
23 Itemplate yemenyu yokutyela
24 Incwadana enemifanekiso enamaphepha amane
25 Iflaya yasimahla yePSD
26 Incwadana enemifanekiso emithathu
27 Incwadana yePSD yeeFlyers
28 Ifomathi yokutya yeRustic
29 Iphetshana lokubonisa
30 Incwadana yokutyela yeediliya
31 Incwadana yemenyu yokutyela yakudala
Uyenza njani incwadana
Iyaboniswa loo nto Ulwazi olukwimo yeefoto lunomtsalane ngakumbi kunolwazi olubhaliweyo Ke ngoko, ukuhamba neencwadana zethu zemifanekiso kunye nazo zonke iintlobo zezixhobo zemizobo kunokusinika inqaku elongezelelekileyo lokubonakala kunye nokusebenza ngokukuko. Ekupheleni kosuku, yintoni malunga nokutsala umdla wabathengi abanokubakho kwaye wenze inkqubo yokufunda ibe yinto eyonwabisayo kwaye eyonwabisayo. Ukongeza ekufezekiseni isenzo esikhawulezileyo njengokuthenga imveliso okanye ukuqesha inkonzo, ukuba siyakwazi ukuvusa iimvakalelo kumfundi, baya kuba nakho ngakumbi ukusikhumbula kwaye bafuna ukubuyela kuthi kwixa elizayo. Esona sisombululo sisiso siya kubetha ibhalansi phakathi kokufundeka, isitayile, uqoqosho kunye nokucacisa.
Imizekelo engama-30 yeencwadana ezinemifanekiso yeehotele
Incwadana elungileyo Kufuneka iqulathe imibala yequmrhuEwe ilogo kunye nesitayile ekubhalwe kuyo imixholo yazo kufuneka zihambelane nefilosofi kunye nohlobo lweshishini. Kule meko, intetho ebonakalayo nayo kufuneka inamathele kwaye ihlengahlengiswe zombini kumthengisi okanye kumboneleli ngenkonzo opapashiweyo nakumthengi oqeshayo.
Ewe, ayizizo zonke iiprojekthi ezinemigca efanayo okanye imeko. Ngale nto ndithetha ukuba ayizizo zonke izinto esiza kuzithengisa ngezi zixhobo ziyimveliso zethu okanye iinkonzo zethu, kodwa into esiya kuyithengisa ekupheleni kosuku ngamava kunye neseti yovakalelo ekufuneka ibonakalisiwe ngokugqibeleleyo kulwakhiwo lwethu lwegraphic. Kukho iinkampani ezifuna ukuthengisa ubuchule bokuyila, phakathi kwezinye izinto, zidinga abathengi bazo ukuba banxibelelanise iinkonzo zabo kunye nesazisi sabo nombono wokuqala.
Ngokusengqiqweni kwezi meko, ulwakhiwo lwazo zonke izinto zentengiso kunye nomfanekiso odibeneyo kufuneka ube nobuqili ngakumbi, ucingisise kwaye ucoceke. Ukusuka apha ndingathanda ukugxininisa into: Nanini na xa kunokwenzeka, kufuneka sizame ukusebenzisa iingcali zoyilookanye umzobophico ukuba bayawukhathalela lo msebenzi kwaye babeka amava abo kunye nolwazi kwinkonzo yesazisi sakho. Nangona ungafumana isixa esikhulu sezixhobo zasimahla kwi-Intanethi, ukusukela kwiitemplate ukuya kwiivenkile okanye izinto ezizimeleyo, ukuba asazi ukuba sizidibanisa njani kwaye sizinike ithoni ehambelana nesicwangciso sonxibelelwano sehlabathi, siya kufumana isiphumo esingahambelaniyo nesingahambelaniyo .
Kwimeko nayiphi na into, namhlanje singathanda ukwabelana nawe ngokukhetha okungekho ngaphezulu okanye ngaphantsi Iithemplethi ezingama-30 zasimahla ezikwi-intanethi kunye neencwadana Oko akuyi kukunceda kuphela ukuba uwasebenzise kwiiprojekthi zakho zobuqu kodwa kunye nokufumana idosi ebalulekileyo yokuphefumlelwa okanye nokuba ubathathe njengesiseko sokuqala ukuphuhlisa uyilo lwethu. Njengoko ubona kukho iindidi ezininzi zoyilo kwaye ayizizo zonke ezenzelwe ukugubungela iimfuno zonxibelelwano ezifanayo. Nika ingqalelo kwaye uchithe ixesha elininzi ukhetha ukhetho olulungele iprojekthi kunye neshishini lakho. Vavanya ukuba zithini na iimfuno zakho kwaye ngakumbi ukusuka kweliphi icala ofuna ukugxila kulo kunyuselo. Ngaba ucwangcise ukufaka idatha yeshishini efanelekileyo njengembali yokwakheka kwayo? Ngaba ifomathi iya kwakhiwa ngohlobo lwesampulu yeemveliso kunye neenkonzo?
¿QuLuhlobo luni lolawulo oluza kuseka kwaye yintoni izinto uya kuzinika ukubaluleka okukhulu kwaye ke ukubonakala okukhulu ngaphakathi kokubumba kwakhon? Yeyiphi incasa esemlonyeni wakho ofuna ukuyishiya nabaphulaphuli bakho kwaye uza kubacenga njani kwaye ubakhuthaze ukuba bafune ulwazi oluthe kratya malunga nenkampani yakho? Le yimibuzo ekufuneka uzibuze yona ngaphambi kokuya emsebenzini kuba ulwakhiwo kunye nokubonakalayo kuya kwahluka ngokuxhomekeka kwiinjongo ozijongileyo.
Imizekelo engama-25 yobume bencwadana
Kolu khetho sikushiye namhlanje unokulufumana Uyilo oludlulayo nolwangoku simahla kwaye ngaphezu kwako konke, kulula ukuyisebenzisa kwaye uyihlele de ufumane esona siphumo sinqwenelekayo.
Isondlo kunye nendlela yokuphila esempilweni
Lo ngumzekelo olungileyo wencwadana encinci. Icocekile kwaye icocekile idiptych ebonelela ngolwazi olufanelekileyo ngendlela emfutshane kwaye ngaphandle kokulahla amandla okufota. Njengoko ubona, ijolise kumashishini ezempilo ukuze imibala yayo yenziwe ngamathambeka agudileyo kunye nokudityaniswa kwezisombululo ezibhekisa kwindalo enje ngeorenji, luhlaza, mdaka kunye nohlaza.
Incwadana enemifanekiso enxulumene nehlabathi lefashoni iya kunika ukubonakala okukhulu kwiifoto kunye nakwimpembelelo. Le template ingaluncedo kakhulu ekuzekeni ngokwakho ukuba uza kwenza uqhakamshelwano lwakho lokuqala nolu hlobo lomsebenzi.
Iflaya yomdibaniso yeenkampani
Iiflaya zeshishini zithanda ukubhenela kwizisombululo ezintle nezinobunkunkqele ezisebenzisa ubuncinci kwaye ngakumbi indawo efundekayo nenocwangco. Iintloko zoxwebhu okanye emacaleni zihlala zibandakanya uyilo kunye nemifanekiso elula eneebhulethi.
Ezona triptychs zangoku zinezisombululo ezinezinto ezibonisa ngokucacileyo kunye nezikhongozeli zolwazi ezakha ulwazi kakuhle kwaye zahlule kwimvelaphi ehlala inemifanekiso kunye nemvelaphi edla ngokungaqwalaselwa. Zihlala zilula kwaye zifundeka lula.
ukuba amashishini kunye neeprojekthi ezinxulumene nehlabathi lokwakha Kunomtsalane kakhulu ukudlala kunye nolwakhiwo oluqinileyo nolomeleleyo kunye nemifanekiso kunye nomxholo obonakalayo obanzi.
Iimenyu zokutyela mazibe ngaphezulu kwayo yonke into esebenzayo kuba ziyilelwe ukuba zisebenze njengesalathiso ngexesha lokuthenga okanye e ukutsala izidlo ezintsha. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba iindawo ezinkulu zabelwe iikholamu zeemveliso kunye namaxabiso kwifomathi yokubhaliweyo. Ulwazi kufuneka lube lula ukufumana.
Kwicandelo loyilo lwangaphakathi, ukubalasela komfanekiso kukwabonakala kuba indawo ezinkulu zesithuba kufuneka zithotyelwe kuzo zivelisa imifanekiso emikhulu apho kunokwenzeka khona ukuba uqonde ubuncwane beemeko.
Isitayile seflethi sinokuba nomtsalane ngakumbi ngakumbi kumashishini anento yokwenza nayo Ihlabathi lezolonwabo kunye neetekhnoloji ezintsha. Sebenzisa imizekeliso kunokwenza ulwazi lobuchwephesha phantse ludlale kwaye umxholo wabantwana ube nobuchule ngakumbi kwaye ubandakanyeke.
Kumashishini anento yokwenza no-czelaphu Isampulu yokwakhiwa kwencwadi iyimfuneko, kuba iimveliso ezinokuthengwa ngumthengi kwaye leliphi icandelo abalibonelelayo kwiimodeli zabo kufuneka ziboniswe.
Incwadana encinci yeenkampani
Iincwadana yenzelwe imibutho Batyekele ekubeni babenokubaluleka okukhulu kumxholo wokubhaliweyo kuba bahlala beqokelelwa kwidatha enje ngembali yokusekwa kweshishini, amaxabiso kunye nefilosofi elandelwa ngumbutho odibeneyo kwaye ke izinto ezincinci kunye nokugqitywa okucocekileyo.
Incwadana enemigca emincinci yeemoto
Nanku umzekelo onomdla kakhulu wediptych yeemoto: Kuyo indawo elungileyo yesithuba inikezelwe ekufakweni kwemifanekiso yezithuthi kwiindlela ezahlukeneyo, imiqondiso yemoto kunye neemephu.
Incwadana yokudibanisa idiptych
Nanku omnye umzekelo onomtsalane kwaye ujolise kwiincwadana ezinemifanekiso. Apha siyabona ukuba uyilo lwezixhobo lukhona ngoku kwaye izisombululo zejiyometri zixutywe nomfanekiso kunye nesicatshulwa.
Kwimeko yezeshishini ezona zisombululo zakudala zinokuba lukhetho olufanelekileyo. Apha sibona ulwakhiwo lohlulwe lwaba Iikholamu ezi-3 kwaye ubukhulu becala kulwazi olubhaliweyo kunye nokunqongophala kwezinto zokuhombisa.
Incwadana engaphambili nangasemva
Nantsi itemplate elula ye- triptych kwifomathi yePSD kwaye inokuba luncedo kakhulu kuba inokuhlengahlengiswa kulo naluphi na uhlobo lwesisombululo.
Incwadana enemibhalo emibini yeentliziyo
Kukho ezinye iindlela ezizezinye ezikude kakhulu nobuchwephesha bobuchule obunokusebenza kakuhle usasaze imiyalezo kunye nokuvuyisana ngemihla ekhethekileyo enjengeyeValentine.
Ngamanye amaxesha ezona zisombululo zilula zinokusetyenziselwa yenza umboniso wemveliso Nangona kusoloko kubalulekile ukulungelelanisa umbala wombala kwisisombululo esidibeneyo.
Umfanekiso oza kuthengiswa kuqala uya kuba yile ubungcali kunye nokuzimisela, Ke ukhetho lwemifanekiso kunye nolwimi luya kubaluleka kakhulu.
Iincwadana ezinemifanekiso ekufuneka ziphuhlisiwe ziinkampani zokhenketho kufuneka zikulungele ukuba nazo iimephu, izicwangciso kunye neefoto ukwenzela ukuba umsebenzisi athathe isigqibo sokuthatha uhambo ngokukhawuleza.
Ukusetyenziswa kwemibala yebala kunye neendawo ezinkulu ezinobumba lukhetho olufanelekileyo ukuqaqambisa izicatshulwa, imiyalezo kunye neelogo. Umbala omnyama unomdla kakhulu nangona kufanele ukuba uthintelwe ukuba siza kuphakamisa ukudityaniswa okukhulu kwetekisi.
Incwadana ye-Shidler Trifold
Kwiindawo zangaphakathi onakho dlala ngemifanekiso kunye nezihloko kuba banokusebenzela ukubonisa kakuhle le nto sithetha ngayo, nokuba yimveliso okanye yinkonzo.
Incwadana yokutyela iflyer
En los iimenyu zokutyela okanye iiflaya, Sinokubandakanya imifanekiso efakwe kwiikholamu zexabiso. Umthengi uya kuthatha isigqibo sokutya inani elikhulu leemveliso ukuba zibonisiwe kunye neefoto zokutya ezinomdla.
Itemplate yemenyu yokutyela
Kwezinye iimeko, ngakumbi kwi iindawo zokutyela eziphezuluEsona sisombululo sisiso sinokubandakanya i-logo kunye nonobumba kuphela.
Incwadana enemifanekiso enamaphepha amane
Nangona inqabile, incwadana inokuyilwa ngohlobo lwe ikhathalogu, ngakumbi xa sizimisele ukwenza ingqokelela engqindilili yeemveliso.
Iflaya yasimahla yePSD
Kuyacetyiswa ukuba ngaphambi kokuya emsebenzini sicace malunga nemibala ehlanganisiweyo. Ngamaxesha amaninzi kuya kufuneka sibhenele kwimibala yesibini okanye eyahlukeneyo kwizinto ezihlanganisiweyo kwaye kuya kubaluleka ukuba siyazi indlela yokudibanisa kakuhle.
Incwadana enemifanekiso emithathu
Sinokusebenzisa imifanekiso kwizihloko zekholamu nganye. Ngale ndlela siya kuba nakho ukwahlula ngcono kwaye sakhe ulwazi.
Incwadana yePSD yeeFlyers
Ngokusebenzisa imibala kunye neegradients esinako Nika umthamo kunye nokuyalela ukwakhiwa. Yiyo loo nto inkqubo yokufunda ifanelekile ngakumbi.
Ifomathi yokutya yeRustic
Kumashishini aluhlaza sinokubhenela ku ngakumbi ubuhle be-rustic ngomthi okanye iphepha leemoto kunye nokuthungwa.
Iiflaya zihlala zinayo zincinci kakhulu ke kuyakufuneka ukuba siyazi indlela yokudlala ngendawo ukuze umfundi afumane ulwazi ngokulula xa uthi krwaqu.
Incwadana yokutyela yeediliya
I-aesthetics yeediliya inokongeza incasa elungileyo kunye nobuhle bokutya kunye neencwadana zeshishini lokutyela.
Incwadana yemenyu yokutyela yakudala
Isenokuba ngumbono olungileyo ukudlala neempawu zentsimi yobungcali kunye nezinto ezichongiweyo ngokuthe ngqo kwaye ezinxulunyaniswa neemvakalelo ezinqwenelekayo kunye neengcinga. Nanku umzekelo wemenyu yeklasikhi enxulunyaniswa ngokukhawuleza namagama afana nosapho, ukusondela kunye noxolo.
Ukuba emva kolu khetho lumnandi ubusoloko ufuna ngaphezulu okanye ungakhange ukwazi ukufumana uyilo olulungele iimfuno zakho, Ndikucebisa undwendwele le bhanki yezixhobo apho kukho iitemplate ezininzi zeshishini kunye nokunyeIzinto s simahla ngokupheleleyo. Nantsi isampulu encinci yento onokuyifumana apho:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » itemplates » Incwadana ye-Intanethi, iitemplate zencwadana yasimahla ezingama-30
Izimvo ezi-21, shiya ezakho
UPatricio rosero sitsho
Phendula uPatricio Rosero
UManuel Ramirez sitsho
Phendula uManuel Ramírez
UDario Gonzalez David sitsho
izinto ezintle, enkosi
Phendula Dario Gonzalez David
@Dario Gonzalez David wamkelekile!
@Vivi Suárez enkosi Vivi! Ndiza kujonga
@Omar wamkelekile! : =) Ndiyabulisa
Ishampu yesitampu sitsho
Ukudityaniswa okuhle kakhulu. Iluncedo kwabo bafuna ukuprinta iincwadana zabo ukuba babe neetemplate ezahlukeneyo nezentsusa ezinje ngezi. Ndiya kubacebisa kubaxhasi bethu abafuna ukwenza izinto zabo zokwazisa. Konke okugqibelele!
Imibuliso yesitampu! : =)
I-vicky avalos sitsho
Phendula i-vicky avalos
Ewe zinokukhutshelwa. URené.Yiphi ongayi kuyenza?
uyilo olumangalisayo, ndikhuphele enye yoyilo kwaye ndingathanda ukuba undincede
Ndingayifumana njani into ebonakalayo enokuthi uyinike yona kwi-3d, iya kuba luncedo kakhulu
enkosi kakhulu, ndiyabulisa
Yintoni uyilo lweKayme?
UOscar Barrera sitsho
Enkosi kakhulu kakhulu ...
Phendula uOscar Barrera
Ungabatshintsha ukuze ubenzele igama uVictor
Enkosi ngokwabelana ngezi zinto
URafael Garcia sitsho
Iitemplate ezilungileyo kakhulu ziluncedo enkosi
Phendula kuRafael Garcia
molo mhlobo, zilandwe njani ndizamile kodwa andazi ukuba kanjani ndicela uncede.
UIvis Ramos sitsho
Molo emva kwemini, ndingathanda ukubana iitemplates ziyile iflaya… ndiyaqala kwesi sixhobo kwaye kunganomdla ukuba negalari esezandleni… Ukuba ubunobubele… Enkosi…
Phendula ku-Ivis Ramos
Ibhokisi kunye nokuthwala ibhegi